नयाँ रेकर्ड बनाउँदै ‘छक्का पञ्जा ३’, यति छ कलेक्सन « Ramailo छ
नयाँ रेकर्ड बनाउँदै ‘छक्का पञ्जा ३’, यति छ कलेक्सन
‘छक्का पञ्जा ३’ ले बक्स अफिसमा धमका मच्याइरहेको छ । घटस्थापनादेखि प्रदर्शनमा आएको यो मल्टीस्टारर फिल्मले हालसम्म पनि दर्शकलाई हलमा आकर्षण गरिरहेको छ । पहिलो र दोश्रो श्रृंखलाले बक्स अफिसमा सर्वाधिक कमाइ गर्ने फिल्मको रेकर्ड बनाउँदा ‘छक्का पञ्जा’ को तेश्रो श्रृंखलाले चाहिं कति कमायो होला त ?
‘घटस्थापनादेखि कार्तिक ४ गतेसम्म ‘छक्का पञ्जा ३’ ले बाह्र करोड कमाएको छ’, फिल्मका निर्माता र वितरकको भनाई छ । १२ दिनमा ‘छक्का पञ्जा ३’ ले गरेको यो व्यापार सर्वाधिक हो । पहिलो र दोश्रो पछि तेश्रो श्रृंखला व्यापारिक रुपमा अब्बल दह्ररिएको छ । सर्वाधिक व्यापार गरेको ‘छक्का पञ्जा’ ले १६ करोड कमाएको थियो भने छक्का पञ्जा २ ले चौध करोड माथिको कलेक्सन गर्यो । के ‘छक्का पञ्जा ३’ ले अघिल्ला दुई श्रृंखलाको रेकर्ड तोड्ला ? दिपक र दिपासँग गरिएको रमाइलो कुराकानी हेर्नुस् :
हालसम्मको बक्सअफिस रिपोर्ट बुझ्दा ‘छक्का पञ्जा ३’ ले नयाँ व्यापारिक रेकर्ड राख्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । किनभने दुई साता हुंदा पनि हलमा दर्शकको चाप उच्च नै छ । फिल्मले राजधानी र देशका मुख्य मुख्य शहरमा आक्रमक रुपमा दर्शक तानिरहेको छ । केदार र दीपिकासँग गरिएको रमाइलो कुराकानी हेर्नुस् :
‘छक्का पञ्जा ३’ मा सरकार र निजि विद्यालय बिचको अन्तरलाई देखाइएको छ । यो विषयलाई दर्शकले रुचाएका छन् । फिल्ममा दिपकराज गिरी, दीपिका प्रसाईं, केदार घिमिरे, जितु नेपाल, बुद्धि तामांग, निर शाह, जयनन्द लामा, लक्ष्मी गिरी, शारदा गिरी लगायतको मुख्य भूमिका छ ।